Maka: uvavanyo lwebrawuza | Martech Zone
Maka: uvavanyo lwebrawuza
Ukuba ukhe wavavanya indawo kwizikhangeli eziphathwayo kunye nezethebhulethi, kunokuba nzima kwaye kudle ixesha. Ezinye iinkampani zize nezixhobo zokulinganisa ukuhanjiswa kwezixhobo, kodwa azikaze zifane nokuvavanywa kwisixhobo ngokwazo. Ndifunda iphephabhuku loMyili weWebhu namhlanje kwaye ndafumanisa ukuba iAdobe isungule iShadow, isixhobo sokunceda abaqulunqi ukuba babambane kwaye basebenze nezixhobo ngexesha lokwenyani. Ekuboneni kokuqala,
Ukuvavanywa kwesikhangeli esiphambanweni kwenziwa ngokuLula
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 13, 2012 Douglas Karr
Ukuba kuphuhliso lwewebhu okanye uyilo lwewebhu, uyazi ukuba owona msebenzi uphazamisayo xa ugqibe uyilo oluhle kukuqinisekisa ukuba isebenza kuzo zonke izikhangeli. Ayisiyiyo kuphela isikhangeli kunye nenkqubo yokusebenza enokuba nefuthe elibi kwindlela iphepha elinikezela ngayo, ngokunjalo neeplagi oziqhubayo! Sazisa indawo ye-VA Loan Captain, othenge umxholo kumntu wesithathu. Endaweni yokuzama ukuqikelela ukuba